အစိုးရက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေ ဟုဆို - Yangon Media Group
အစိုးရက ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု လျှော့ချရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေ ဟုဆို
အစိုးရအနေဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဝင်းသိန်းကပြောသည်။ ဝန်ကြီးချုပ်အနေနှင့် ဇန်နဝါရီ ၂၂ရက် တွင် ဒိုက်ဦးမြို့နယ် သုံးခွကျေးရွာ အထက ကျောင်း၌ပြုလုပ်သည့် ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည် ရေးကျောင်းဆောင်သစ် လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ယင်းကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ ”မိမိတို့အစိုးရအနေဖြင့် မြို့ပြနှင့်ကျေး လက် ဆင်းရဲချမ်းသာကွာဟမှု ပပျောက်ရေး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးတို့အတွက် နယ်စပ်ဒေသမကျန် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ပညာရေးအပါအဝင် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ကဆိုသည်။
မြို့ပြနှင့်ကျေးလက် ပညာရေးသင်ယူမှု တန်းတူဖြစ်ရေး၊ ကျောင်းဥပဓိရုပ်များ ကောင်းမွန်တိုးတက်စေရေးအတွက် ပညာရေးအရည် အသွေးဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်ခုနစ်ချက်၊ အသွင်သဏ္ဌာန်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက် ငါးချက်၊ စုစုပေါင်းလုပ်ငန်းစဉ် ၁၂ ချက်ချမှတ် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းသိရသည်။ ”ပညာရေးကို မဏ္ဍိုင်ပြုပြီး အနာဂတ် နိုင်ငံတော် တည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့က အမျိုးသားရေးတာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်လို့ ဆရာ၊ ဆရာမ များအားလုံး မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်၊ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ်တွေ တိုးပွားခိုင်မာစေရေး၊ စာရိတ္တနဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားကောင်းမွန်စေရေး၊ ကူညီရိုင်းပင်းတတ်သည့် အလေ့အထကောင်းများ ဖြစ်ထွန်းရေး၊ စာပေပညာရပ်များ တတ်မြောက်ရုံသာမက လိမ္မာရေးခြားရှိပြီး ကျောင်းစည်းကမ်း၊ ရပ်ရွာစည်းကမ်း၊ နိုင်ငံတော်ရဲ့တရား ဥပဒေများကို လေးစားလိုက်နာတတ်စေရေး တို့ကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့လိုပါတယ်”ဟု ဝန်ကြီးချုပ်ဦးဝင်းသိန်းက ပြောသည်။
တပည့်များအား အတတ်ပညာစွမ်းရည် စိတ်ဓာတ်ပြည့်ဝထက်မြက်ခိုင်မာစေရေး ပြုစု ပျိုးထောင်ပေးခြင်းဖြင့် လူမျိုးအကျိုးစီးပွားကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်နိုင်သည့် သားကောင်း သမီးမွန်များဖြစ်အောင် အဆက်မပြတ် လေ့ကျင့်ပျိုးထောင်ပေးကြရန် လိုအပ်ကြောင်း လည်း ဆိုသည်။ အဆိုပါကျောင်းအဆောက်အအုံသည် RC (၁၂ဝx၃ဝ)ပေ၊ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် ဖြစ်ပြီး မြန်မာငွေကျပ် ၁၉၉၂ သိန်း (ကန် ဒေါ်လာ ၁၄၆၇၂)ဖြင့် ဂျပန်-မြန်မာ ချစ်ကြည် ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ လှူဒါန်းခဲ့ရာ ဂုဏ်ရှိန်ကြယ်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ တာဝန် ယူတည်ဆောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကုလသမဂ္ဂ၏ ရခိုင်ပြည်နယ်အရေး ဆောင်ရွက်မှုသည် လိုရာရှုထောင့်မှ ချဉ်းကပ်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ရလဒ်ကိ?
လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုကြောင့် တရားစွဲဆိုခံရမှု များပြားလာခြင်းအပေါ် အစိုးရအနေဖြင့်ြ?
နာမကျန်းဖြစ်နေသော ကလေးငယ်များကို ကူညီရန် မင်းသမီး ဟွမ်ဂျောင်အွန်း ဝမ် သန်းတစ်ရာ လှူဒါန်း